MediaLight Mk2 Dimmable A19 Bulb - Jiro MediaLight Bias
Mitahiry hatramin'ny $10.00 Save $10.00
Vidiny tany am-boalohany $39.95
Vidiny tany am-boalohany $39.95 - Vidiny tany am-boalohany $309.95
product.variants.choose_variant Single / E26 / 110v - $ 29.95 Single / E27 / 220v - $ 29.95 6-Pack / E26 / 110v - $ 179.95 6-Pack / E27 / 220v - $ 184.95 12-Pack / E26 / 110v - $ 299.00 12-Pack / E27 / 220v - $ 309.95
E26 / 110v E27 / 220v Zintin'aratra
Ny MediaLight Bulb dia natao hifanaraka amin'ny SMPTE Standard ST 2080-3: 2017 'Reference View Environment for Evaluation HDTV Images.'
Manasongadina ny mari-pana miloko CRI avo lenta sy Simulated D65 an'ny puce Colorgrade Mk2 avy amin'ny Scenic Labs. ny MediaLight Mk2 tsy azo ovaina dia manome ny tsy fahatomombanana ho an'ny teatra an-tranonao ary io no fanampin-javatra tonga lafatra ho an'ny grading grading.
CCT-6500K avo lenta (maripana miloko mifandraika)
Fanondroana loko (CRI) Ra 98 Ra (TLCI 99)
Manjavozavo milamina sy mafana mafana eo noho eo
Optimised for Lutron dimmers *
3 Year Limited Garantie
Sudam-bary 120 °
Tsy jiro mahazatra io. Tsy mampiasa loharano maivana COB mora vidy izy io. Izy io dia misy puce Colorgrade Mk32 2 (mihoatra ny 1m MediaLight Mk2 Eclipse, saingy misy fizarana herinaratra mitovy) ary, tsy toy ny bolam-by COB, tsy mila 15 minitra hahatrarana ny mari-pana amin'ny lokon'ny lokony. Izany no tiana holazaina amin'ny hoe fanafanana eo noho eo.
Ny MediaLight Bulb dia namboarina tsy mitovy amin'ny ankamaroan'ny jiro ary mety hiasa hafa amin'ny dimmer misy anao. It nohamarinina ho an'ny dimmer LED Lutron satria manolotra fanamoriana fanitsiana izay mamela ny fifehezana feno sy marina ny elanelam-potoana. Ary ny vaovao tsara dia ny Lutron dimmers dia misy vidiny mirary. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, mety ho tsara ny dimmera hafa, saingy mety ho hitanao ireto olana manaraka ireto:
Kavina maivamaivana kely kokoa (Mazava ho azy 70-90% isan-karazany vs. 100% miaraka am-piandohana). Mety tsy hidina ambany na avo io.
Ny takamoa LED dia mety tsy hanidy amin'ny toerana maizina ambany indrindra: izany dia vokatry ny fieritreretan'ny dimmer fa maty tanteraka ny jiro noho ny habetsaky ny wattage lanin'ny LED.
Amin'ny rafitra malemy mifototra amin'ny teknolojia fanaraha-maso X10 na Power Line Carrier (PLC), dia mety mihetsiketsika ny LED rehefa mifampiresaka ny modules noho ny fiovan'ny hery kely eo amin'ilay tsipika.
Soso-kevitra ny hizaha toetra ny dimmers misy anao izao hahitanao raha toa ka miasa miaraka amin'ny takamoa MediaLight novidinao izy ireo. Ny mety dia hiasa tsara izy ireo. Raha tsy izany dia voavaha ny olana amin'ny alàlan'ny fividianana dimmer voalaza etsy ambany:
Ary koa misy ny dimron'ny Lutron Caseta. Raha mbola misy faran'ny ambany dia hiasa tsy misy fandriam-pahalemana na fidinana tampoka eo amin'ny toerana ambany.
5.0 Miorina amin'ny 16 Reviews
Fampisehoana tsara avy amin'ny vokatra mivaingana.
Afa-po tanteraka aho tamin'ny fampisehoana ireo takamoa Mk2 Ipurchased. Ny mamaky sy mijery ny fahitalavitra dia mahafinaritra sy miala sasatra kokoa. Ny loko dia mavitrika kokoa nefa tsy tototry ny nofo ary mora vakina kokoa ny lahatsoratra raha tsy misy ny fihenan'ny maso. Entanina be ho an'ny maso efa antitra.
Tokana / E26 / 110v
Ny jiro A19 dia tonga lafatra ary izay antenaiko rehetra avy amin'ny MediaLight
Tena tsara, saingy mila fahaizana bebe kokoa aho
Tsy maka kintana aho raha toa ka manao izay voalaza ao ny vokatra. Na izany aza, mety ho maivamaivana ny kinovin-jiro ho avy raha tsy mila dimmer fitaovana, ala the Hue ary takamoa hafa. Tsara raha mifamatotra amin'ny fampiharana sy / na mpanampy am-peo. Ary koa, tsara raha manana safidy roa-loko. Fantatro fa tsy miraharaha an'io ny tsena kendrena, fa ho an'ny olona toa ahy izay te-hampifangaro ity fiasa ity sy ny fahamendrehan'ny loko amin'ny tontolo iainana mahazatra dia zava-dehibe izany. Tsara raha mivadika ho 6500 eo am-panovana, avy eo zavatra somary mafana kokoa amin'ny zavatra hafa rehetra, miaraka amin'ny fahafaha-mihena amin'ny toerana mipetraka amin'ny alàlan'ny fampiharana sy / na feo am-peo.
Tiako ireo jiro ireo!
Nahazo ireo aho rehefa te hanana jiro fanampiny fanampiny hamenoana ny jiro mihantona Medialight MkII. Ny vokatra dia vita tsara, mora apetraka ary jiro avo lenta amin'ny vidiny mirary - izany rehetra izany dia misy serivisy ho an'ny mpanjifa mahafinaritra. Hihamaro ny toro-hevitra omeko azy ireo!